"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၄ မှာ သမ္မတ ဖြစ်မယ်" | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| December 31, 2012 | Hits:19,050
31 | | နက္ခတ္တဗေဒ ဆရာ စံဇာဏီဘို (ဓာတ်ပုံ- ဧရာဝတီ)
“အခွန် ၂ ထပ် နီးပါးပေးရသလိုပဲ”
အဆိုတော် သားစိုး နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
Novotel ဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင် ဦးဇော်ဇော်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment mg mg December 31, 2012 - 8:44 pm	အင်း..ဖွနေပြီ…ဖွနေပြီ်…မြင်ယောင်နေတယ်…
Reply	ရွှေဘ January 1, 2013 - 12:58 am	Let’s see whether myth or fact.
Reply	pnwara January 1, 2013 - 11:09 am	အင်း– ဗေဒင်ယုံတဲ့ သူကလဲ ယုံတော့ ဘာမှတော့ မဝေဖန်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့စာရေးသူ အိန္ဒိယ နေစဉ်က ဘီဂျေပီ ပါတီက အစိုးရလုပ် အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်- စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ကိုင်ငန်းတွေ တိုးတက်ပွားများလာတော့ ဘီဂျေပီ က သူ့အစိုးရ ရဲ့အောင်မြင်မှူ အရှိန်အ၀ါ တက်နေချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကို စောစောစီးစီး ကျင်းပလိုက်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ မီဒီယာသမားတွေက လူတွေ့ တိုင်း သဘောထားတွေကောက် စစ်တမ်းလုပ်ကြတယ်။ အဓိက ပါတီကြီး ၂ခုဖြစ်တဲ့ဆိုနီယာဂန္ဒီ ဦးဆောင်တဲ့ကွန်ဂရက်ပါတီ နဲ့ဘီဂျေပီ ပါတီပေါ့-စစ်တမ်းတွေ အရ ဘီဂျေပီး က ရှေ့ ကပြေးနေတယ်။ ကွန်ဂရက် က နောက်မှာ တော်တော်လေးပြတ်ကျန်နေခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့ ကလဲ ဘီဂျေပီ ဘဲပြန်လည် အာဏာရမယ်လို့စစ်တမ်းတွေ ကြည့်ပြီးထင်မှတ်ခဲ့တာပေါ့လေ- ဒီနေရာမှာ ဘုံဘေက နာမည်ကြီး ဗေဒင်ဆရာ နှစ်ယောက်နဲ့ဒေလီမှ နာမည်ကြီး ဝေဒ ဂုရုကြီးတွေက ဟောကိန်းတွေ အသီးသီးထုတ်ကြပါတယ်။ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ (၁)ဘီဂျေပီဘဲ နိုင်မယ်-(၂) ဆိုနီယာ ဂန္ဒီ ၀န်ကြီးချုပ် မဖြစ်နိုင်ဘူး။ (၃)မဟာရာရှတရ ပြည်နယ်မှာ ကွန်ကရက်ပါတီက အမတ်နေရာ ၂ နေရာဘဲ ရမယ်တဲ့- ရွေးကောက်ပွဲ အဖြေလဲ ထွက်လာရော နာမည်ကြီး ဗေဒင်ဆရာရဲ့ဟောကိန်းတွေ တက်တက်စင်အောင်လွဲတာပေါ့လေ- နောက်ခုပြောချင်သေးသဗျ- အမေရိကန်သမတရွေးကောက်ပွဲမှာ ကွန်းဆာဗေးတစ်ပါတီမှ ပြန်လည်အရွေးခံမည့် ဂျော့ ဒဗ္ဗလူ ဘုရှ် နဲ့ဒီမိုကရက်ပါတီ မှ ဂျွန်ကယ်ရီ တို့ယှဉ်ပြိုင်ကြရာမှာ အိန္ဒိယမှ နာမည်ကြီးဝေဒ ပညာရှင်တွေ ဟောကိန်းထုတ်တာက ဂျွန်ကယ်ရီ ဘဲနိုင်မယ်- သူ့ ဇာတာခွင်အရ ဘယ်လို ဘယ်ပုံပေါ့ဗျာ-မွေးလ မွေးရက် က ဂျွန်ကယ်ရီ အဖို့ကံကောင်းသတဲ့- ဘုရှ် ကြီးကတော့ ကံနိမ့နေသတဲ့-ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ သိကြတဲ့အတိုင်းပါဘဲ- ဘုရ်ှဘဲ သမတပြန်လည်ဖြစ်လာပါတယ်-အခုလဲ ဒေါ်စု ၂၀၁၄ မှာ သမတ ဘဲဖြစ်မလား-ဒါမှ မဟုတ်ဘဲ ဂျောင်ထိုးထားမလားဆိုတာ စောင့်မျှော် ရှူစားကြပါခင်ဗျာ-
Reply	ရွှေဘ January 2, 2013 - 8:50 am	အိန္ဒိယကဗေဒင်ဆရာမို့လို့ တလွဲဖြစ်သွားတာနဲ့တူတယ်။ အခုဟာက မြန်မာ ဆရာလေ…အဟက်။
US မှာ ကွန်းဆာဗေးတစ်ပါတီ ဆိုတာရှိလို့လား ဆရာသမားရယ်။ ကြည့်လည်းလုပ်ပါဦး။
ကိုယ့်ဆရာကိုယ်တိုင်တလွဲဖြစ်နေလျင် တော့ ဗေဒင်ဆရာတွေလည်း တလွဲ ဖြစ်တော့မပေါ့။
Reply	pnwara January 3, 2013 - 12:54 pm	ဆော်၇ီးဗျ- အခုလိုထောက်ပြတာ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ- ကွန်ဆာဗေးတစ် အစား ရီပါ့ဘလီကန် ဟုပြင်ဆင်ပါ၏-
Reply	Tayoke January 1, 2013 - 4:10 pm	I believe this Burmese prophet had nightmare before he woke up.
Reply	SURPRISE January 1, 2013 - 6:00 pm	WELLCOME 2013.WELLCOME DAW SU.
Reply	Min Hthet Ther January 1, 2013 - 11:22 pm	Laughter, the best medicine.
Reply	honey January 3, 2013 - 9:07 pm	လေးစားပါတယ်..ခန့်မှန်းချက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါစေ..
Reply	မင်းကြီးညို January 3, 2013 - 11:40 pm	ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ့ ဟောကွက်တွေက ၉၅%က မမှန်ဘူး။ ကျွန်တော်ဟောစာတမ်းရဘူးတယ်။
နောက်ပြီး လက်ဝါးအရွယ်အိတ်ဆောင်ဟောစာတမ်းလေးတွေသူထုတ်တယ်။ နေ့သားအလိုက်၊
နောက်ပြီး လဂ်တည်ရှိရာ ရာသီခွင်အလိုက် ဟောစာတမ်းတွေလည်းဝယ်ဖတ်ဖြစ်တယ် ၉၅%
မမှန်ဘူး။ အဲဒီဟောစာမ်း(အိတ်ဆောင်)စာအုပ်တွေ ပြက္ခဒိန်နှစ်သာကုန်သွားတယ်။ စာအုပ်
ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းမကုန်လို့ နောက်နှစ်နောက်နှစ်တွေကျတော့ ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ့စာအုပ်တွေ
ကို ဆိုင်မှာ မတင်ကြတော့ဘူး။
Reply	htooaung April 2, 2013 - 9:00 pm	ထောက်ခံတယ်ဗျာ ပြောနိုင်ဖတ်နိုင်တိုင်းပညာမဟုတ်ပါဘူး ကျော်ကြားမှုနဲ့ ငွေနောက်လိုက်ရင် အမှန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ ဥာဏ် ကွယ်သွားတယ်
Reply	ဖေကံကောင်း January 4, 2013 - 1:28 pm	ထင်ရာမြင်ရာတွေပေါ့—ဖြစ်ခြင်တာနဲ့ဖြစ်လာတာနဲ့ကြိုတင်လူံ့ ဆော်မှူ့ တွေဘဲ ကောင်းစေချင်ပါတယ် အားလုံ့း–
Reply	Hla Yeir Htut January 5, 2013 - 11:39 am	အဲဒီအိတ်ဆောင်စာအုပ်ကိစ္စမှာ…အဆိုးတွေကြတော့…တော်တော့်ကိုမှန်တယ်ဗျာ..(၂၀၀၈..၂၀၀၉တွေတုန်းကပေါ့)ကျနော်နှစ်တိုင်းဝယ်ထားတယ်…အခုမ၀ယ်တာ(၂)နှစ်ရှိပြီ…အမှန်ပြောရင်သူကအဆိုးပြောရင်မှန်တတ်တယ်….
Reply	အာပေတူး January 7, 2013 - 3:03 pm	မသိလို့မေးချင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ၁၉၉၀ လောက်မှမွေးတာဆိုတော့
သိချင်လို့မေးကြည့်တာနော် ဖွားဖွား ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်က
ကျွန်တော်တို့လည်း နောင်လာနောင်သားတွေကို ပြန်ပြောပြချင်လို့ပါ
Reply	ညည January 17, 2013 - 8:48 pm	ဒေါ်အောင်စုကြည်က အနောက်နိုင်ငံများကိုအားကိုးပြီး ကချင်တိုက်ပွဲကိုငြိမ်စေသည့်နည်းလမ်းရှာဖွေရမည်။ သာမ တိုင်းရင်းသားမှ မဲအင်အားရလာ ပြီး သမတ္တဖြစ်လာနိုင်မည်။